मोदीले नेपाललाई मात्र महत्व दिएको भन्दै भारतीय कांग्रेसद्वारा असन्तुष्ट - E ALL NEPAL
मोदीले नेपाललाई मात्र महत्व दिएको भन्दै भारतीय कांग्रेसद्वारा असन्तुष्ट
काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (कांग्रेस–आई)ले नरेन्द्र मोदीलाई मात्रै महत्व नदिन नेपाललाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दलगत हितमा उपयोग गरेकोमा आलोचना गर्दै उसले नेपाल सरकारलाई सचेत रहन भनेको हो ।
कुटनीतिक उच्चस्रोतका अनुसार कांग्रेस आईले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)लाई नै तोकेर नेपाललाई छुट्टै आग्रह गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस आईले वर्तमान सरकारको छिमेक नीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढ्दै छ । यसै सन्दर्भमा उसले नेपालसँग पनि मोदीको विदेश–नीतिको विषय उठाएको समाचार अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ ।
नेपाल सिंगो भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा यसअघि नचुकेको समेत भारतीय कांग्रेसको धारणा छ । उसले छिमेक यस्तोमा उपयोग हुन नहुने भन्दै सचेत रहन औपचारिक/अनौपचारिक आग्रह गरेको हो । कांग्रेस आईले कूटनीतिक च्यानलमार्फत समेत यस्तो सन्देश प्रवाह गरेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले बताए ।
काग तिहारको दिन सुटुक्क गर्नुहोस् यी काम ! कहिल्यै हुनेछैन् धनको कमी !
आज बिहानै रोकिराखेको ट्रकमा बस ठोक्किँयो , ११ जना घाइते : २ जनाको अवस्था चिन्ताजनक
नेपाल प्रहरी भारत को लखनउ छिरेर ५ नेपाली को हत्या गर्ने अपराधी पक्राउ गर्दा भारतमा…
आमाले फ्यालेर हिँडिन् :बेवारीसे शिशुलाई महिला प्रहरीले गराईन स्तनपान, दुनियाँका आँखा…
अफगानिस्तानमा एक्लै १५ मिनेटमा ३० जना आतंकवादीलाई सिध्याउने नेपाली जवान पुन सम्मानित…